GIM ee Caalamiga Isbaanishka, ayaa sii wata guusha wanaagsan - Geofumadas
Mee, 2015 Geospatial - GIS
Qaybta koowaad ee xiga ee 2015 ayaa iigu yimid aniga, hubaal ahaanba waa qadar qiimo leh oo ku qoran luqada Isbaanishka.
Maaddooyinka kali ah waxay yiraahdaan qiimaha ay wadashaqeyntu ka dhigan yihiin:
Marxaladda cusub ee maamulka dhulka ayaa soo baxa. Tani waa maqaal weyn oo Chrit Lemmen iyo saddex saaxiibadood ay ka wada hadlaan sida hababka, barnaamijyada kombiyuutarka iyo hababka caalamiga ah ay u hogaaminayaan maamulka xuquuqaha ee ka baxsan UML-yada fudud ee ISO19152.
Bixinta midabka daruuraha dhibcaha. Sam Fleming, Iain Woodhouse iyo Antoine Cottin ka hadal sida horumarka Lidar badan oo isbeddel ah ay isbeddelayaan sida aan u aragno dariiqooyinka daruuriga ah.
¿GIS miyuu dhintay? David Rhind wuxuu inoo sheegayaa mid ka mid ah oo ay ku magacawday buug dabiici ah, oo soo jeediyay hindisaha Geographic Information Systems iyo Sayniska (GISS).
Ford iyo farshaxanka dayactirka khariidada. Tani waa falanqeyn aad u fiican oo la mid ah qaabka Ford ee habka loola xisaabtami karo ee deynta. Waxba kama jiraan haddii aan tixgelinno qaddarka lacagaha lagu maalgelinayo hababka loo qaadayo iyo tirinta macluumaadka ... iyo waxoogaa yar ee cusbooneysiinta iyo dib u soo kabashada.
Baadhitaanku waa xirfad aad u baahan tahay inaad hore u fekerto. Marka ugu horeysa haweeney ayaa guddoomisa FIG, iyo GIM-yada Caalamiga ah waxay qaadataa wakhti ay ku waydiiso su'aalaha 16.
Dib u qaabaynta heerka faahfaahinta qaababka 3D. Tani waa qiiqa dhexe oo sigaar cabba, iyada oo la tixgelinayo kakanaanta heerka faahfaahsan (LOD) ee codsiga heerarka magaalooyinka 3D.
Falanqaynta dayrta barafka imtixaanka. Tani waa xaalad ah isticmaalka Unugyada Diyaaradaha ee Aasaasiga ah, si ay u kormeeraan laba sano oo kaliya ma aha oo kaliya qaabka loo yaqaan 'dike', laakiin caddayn in kooxahani ay ka badan yihiin diyaar u ah geeddi-socodka Geo-engineering.
Isdhexgalka macluumaadka geospatial. Maqaalkani José Santizo waxa uu soo koobay hab aad u walaacsan sida horumarka teknoolojiyada ee adeega gaaskafiga, marka la eego kiisaska diyaaradaha aan la wadin, ay u yimaadeen inay abuuraan xalka cusub iyo dib-u-soo-kabashada sidoo kale dalabaad dheeraad ah.
Hambalyo ayaan u diraynaa Geomares, waxaan ku adkeyneynaa daabacaadan loogu talagalay deegaanka Hispanic, codsiyada hadda sida kuwa aan ku aragno daabacaddan.
Sida soo jeedinta, inkastoo xaqiiqda ah in majaladda hadda ay leedahay wada-shaqeeye Isbanishka ah, qaabka "google translate" ayaa la hagaajiyay, laakiin tayada qoraalka farsamadu waxay hagaajin kartaa tarjumaadda ruuxa qoraalka asalka ah.
Post Previous«Previous Dalbashada Amar Dhulka
Post Next Furan faylka GML oo leh QGIS iyo MicrostationNext »